Career Design လုပ်ငန်းစဉ် Vol.4Decision-Making and Planning | Mycanvas
Career Design လုပ်ငန်းစဉ် Vol.4Decision-Making and Planning
Career Design လုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အဆင့်တစ်ခုစီကိုဆောင်းပါးအချို့နဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ Series ရဲ့ စတုတ္ထအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ “ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း” နဲ့ “စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း” အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်ခြင်းကို “ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း” အဆင့်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏အလုပ်အကိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တွင်ဆုံးဖြတ်ရမည်။ အကယ်၍ ဒီအဆင့်မှာ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မသေချာသေးဘူးလို့ ခံစားရရင်တော့ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းအဆင့်ကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ Tip တစ်ခုအနေနဲ့ (ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့သလို) အဓိကအချက်အလက်တွေပေါ်မှာ အာ
ရုံစိုက်ရှာဖွေခြင်းက အလွန်ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ “pre-experiences” လို့ခေါ်တဲ့ အတွေအကြုံပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူခြင်းမျိုးပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင်တော့ အလုပ်သင်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Event တွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။ “ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း” အပိုင်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ “ကြိုတင်အတွေ့အကြုံရယူခြင်း” (pre-experiences) အဆင့်ကိုပြန်သွားဖို့ဝန်လေးမနေသင့်ပဲ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် တာဝန်ယူပြီးပြန်လည် ဆန်းစစ်လေ့လာရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့နောက်မှာ‌တော့ “စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း” အဆင့်ကိုသွားလို့ရပါပြီ။ ဒီအဆင့်မှာတော့ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲရ‌တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ မိမိအတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍သင်ဟာ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ကျောင်း၌ကျွမ်းကျင်မှုအချို့ကိုလေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၊ သင့်ရဲ့ ကျောင်းစရိတ်ကိုထိန်းညှိရန်အတွက် သင့်တော်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျောင်းရဲ့တည်နေရာ၊ Programme တွေရဲ့ အဆင့် စတာတွေကိုသေချာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်တော့ When, Where, Who, What, Why, How to, How much/many ဆိုတဲ့ 5W1H အချက်တွေကို ချင့်ချိန်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။